ILifeStreet Media Yenza Imikhiqizo Idume
ULwesine, May 31, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngokuya ngezinhlamvu zamehlo nezikhala zokunaka, asikho isiteshi esisodwa sokusabalalisa esingancintisana naso imidlalo yomphakathi. Abantu emhlabeni wonke basebenzisa cishe imizuzu eyizigidi ezingama-200 ngosuku bedlala Angry Birds. Umdlalo omusha kaZynga, iCityville, uhehile Abasebenzisi abayizigidi ezingu-100 ngenyanga yayo yokuqala iyodwa. Abakhangisi bangazama ukuhlwitha ucezu lukaphayi wokudlala ngokushelela kweminye imidlalo engajwayelekile enezimpawu zabo, kepha amathuba okuba leyo midlalo ihlale iphaphatheka uma iqhathaniswa nabathengisi abakhulu abathole ukwamukelwa nokuthandwa kabanzi.
Iyiphi indlela engcono kakhulu yokuthi umakethi asebenzise ngokunenzuzo intshisekelo yemidlalo? Ukukhangisa bekulokhu kutholakala kuzinhlelo zokusebenza zamageyimu, kepha ukukhomba izikhangiso ezifanele nabasebenzisi abathatha isinyathelo kube yinselelo. Lokhu kube umgomo we I-Lifestreet's Ipulatifomu yokukhangisa ye-Revjet… futhi bathola imiphumela.
I-LifeStreet inikeza ukukhangisa okungaphakathi nohlelo ngokugxila ku-Facebook, Apple (iOS) nakuzinhlelo ze-Android. Ipulatifomu yezobuchwepheshe yeLifeStreet's RevJet yakhelwe phezu kweseva yento yokuqala emhlabeni ukwenza inzuzo. Lobu buchwepheshe busebenzisa iterative ukuhlolwa kwejubane eliphezulu ezikhangisweni, amakhasi okufika, izinqumo zokushushumbisa, ama-algorithms wokukhulisa imali noma enye into ethola imali.
Ipulatifomu yokwenziwa komsebenzi ye-LifeStreet's RevJet yakhelwe phezu kweseva yento yokuqala emhlabeni jikelele futhi ingumkhiqizo wokutshalwa kwezimali okuthuthukisa ama- $ 25 +. I-RevJet isebenzisa i-Iterative High Velocity Testing kunoma yimuphi umshayeli wemali engenayo edijithali, kusuka ezintweni ezibonakalayo ezifana nezikhangiso namakhasi okufikela ezintweni ezinengqondo ezifana nezinqumo zokushushumbisa kanye nama-algorithms wokukhulisa imali. I-RevJet ikhiqiza amazinga okuphumelela okwenza imali namanani aphezulu ngokwedlulele amakhasimende amasha abakhangisi bezenhlalo nabamaselula, abashicileli nabathuthukisi bohlelo lokusebenza ngokufanayo. I-LifeStreet ifinyelela kubasebenzisi bohlelo lokusebenza bezenhlalo nezamaselula abayizigidi ezingama-350 njalo ngenyanga futhi ishayele ukufakwa kohlelo lokusebenza okungaphezu kwezigidi ezingama-200. Le nkampani yabizwa njengenye yezinkampani ezizimele ezikhula ngesivinini esikhulu eMelika yi-Inc. Magazine kanti izinze e-San Carlos, eCalifornia enamahhovisi eMoscow, e-Odessa naseRiga.
Ngokufinyelela nyangazonke kwabasebenzisi bohlelo lokusebenza bezenhlalo nabaselula abangaphezu kwezigidi ezingama-350, i-LifeStreet iletha amakhasimende kubakhangisi. Amanani entengo aphansi asebenza lapho umkhangisi akhokhela khona imiphumela kunokuchofoza futhi anenketho yokukhetha imethrikhi ayithandayo kusuka ku-Cost Per Install (CPI), Cost Per Acquisition (CPA), Cost Per Post Conversion Event (CPX) nokunye (!), Abakhangisi bezimpawu BANGAKWAZI ukungayinaki i-LifeStreet .. Isikhathi sangempela sokubika esenziwe ngokwezifiso, abaphathi bama-akhawunti abazinikele, nezinye izinsizakalo ezenezelwe inani yi-icing kwikhekhe.
Njengoba iLifeStreet ingenayo imikhankaso ekhuthazayo, uthola amakhasimende anenani eliphezulu kuphela, anentshisekelo yangempela kumkhiqizo wakho. Landa ikhithi yemidiya ku-Lifestreet Media kusuka kusayithi labo.
Tags: androidi-apulaukukhangisa umdlaloipadipulatifomu yesikhangiso seselulaukukhangisa okuhambayoukukhangisa kohlelo lokusebenza lweselula
May 31, 2012 ku-2: 54 PM
Ngokwami, angithandi ukudlala imidlalo enezikhangiso eziningi ngoba ilayisha kancane kunezinye izinhlelo zokusebenza ezingase zingabi nazo izikhangiso eziningi. Kunengqondo ukufaka isikhangiso ku-Angry Birds ngokwesibonelo ngoba abantu abaningi abavela kubantu abahlukahlukene kanye neminyaka bazobona isikhangiso somunye umdlalo noma uhlelo lokusebenza lwenjini entsha yokusesha; kepha kungahle kungasebenzi kuwo wonke umuntu. Ngiyazi ukuthi ngichofoze kubo ngephutha futhi ngacasuka ngokuthi kungiqondise kwenye indawo engaphandle komdlalo. Ukuphonswa phezulu encwadini yami.
UJun 1, 2012 ngo-10: 33 AM
Ngivumelana noMegan, nami angiyithandi imidlalo enezikhangiso ngoba zilayisha kancane. Angikuthandi ukuphazanyiswa, ikakhulukazi uma ngizwa ukuthi ngisebenza kahle futhi ngiku-roll ngomdlalo wami. Ngicabanga ukuthi zisebenza kangakanani izikhangiso.
Kodwa-ke, kuyindawo yokuqala yokukhangisa. Kanye nemidlalo ethile, ungafinyelela izithameli eziningi noma ukhombe izithameli ezithile. Sibona ukukhangisa yonke indawo manje, emidlalweni, empompini wegesi, ku-ATM, njll.
Dec 15, 2014 ku-8: 27 AM
Yebo lo ngumqondo omuhle wokukhangisa, kepha abantu abathanda ukudlala umdlalo ngokugxila kungenzeka bangabi kanjena. Ngoba ukukhangisa kuyabaphazamisa ngenkathi bedlala umdlalo abawuthandayo. Ngenkathi bedlala le midlalo iningi labantu liyazizonda izikhangiso.